Izimali, Izakhiwo zangempela
Kule minyaka eyishumi eyedlule, isimo emakethe e-elite real estate eMoscow sishintshile ngokuphawulekayo. Lokhu kwathinta indawo enkulu kakhulu - uma eminyakeni engu-10 eyedlule i-Rublevka ne-Golden Mile beyakhelwe ngenkuthalo, manje kakade ayikho imikhakha yomhlaba kulezi zindawo. Manje isakhiwo esiphezulu se-elite singathengwa cishe kuzo zonke izifunda zaseMoscow nasesifundazweni saseMoscow. EZamoskvorechye, kwakhiwe izindlu eziningana ze-club nezakhiwo zase-Yakimanka nasePlyushchikha, nasezindaweni eziningi ezisentshonalanga yeMoscow. Futhi ekilasini lase-suburban cottages deluxe manje lingathengwa eNew Riga naseduze kwe-ski resort ye-Yakhroma.
Izinguquko zithinte futhi inqubomgomo yokukhetha indlu noma umthengi wendlu. Uma ngaphambi kokuba umtshali-zimali ahlale ezama ukuthola izindlu ezintsha zokuhlala, manje abantu abaningi bathengisa izindlu ezinjalo noma izindlu zabo, ngakho-ke bakhetha okukhethwa kukho okulandelayo - akekho othanda ukuhlala phakathi nokwakhiwa iminyaka, ngokuvamile izindlu zakhiwa yizinhlaka, futhi izindlu ezintsha zendawo yokuhlala zakhiwa njalo Futhi wandise. Ema-2000s, izindlu nezindawo eziningi zazithengiswa ku "version ye-draft" - ngaphandle kokulungiswa. Namuhla, cishe zonke izindlu ezingasese zendawo zifakwa emakethe ngesiphetho esiphelile.
Ngaphambilini, isihluthulelo esiyisihluthulelo se-elitism ye-real estate yindawo yayo. Ngisho noma izindlu zaseRublevka azizange zihlangabezane nanoma yiziphi izindinganiso zaseYurophu, izindleko zayo zingaba izikhathi eziningana ngaphezu kwentengo yendlu encane kakhulu futhi ekhwalithi ehlala endaweni engavamile. Manje isimo sengqondo samaklayenti e-real estate siye sashintsha, ngenxa yalokho u-Ostozhenka ogcwele ngokweqile uyeke ukujabulela ukuthandwa okunjalo, kuyilapho Amachibi amaPatriatrik aphuma phezulu - okubaluleke nakakhulu ukuzola nokuphila kwemvelo kunokuphila phakathi nendawo eMoscow.
I-Rublevka, naphezu kwenkinga efanayo, namanje ayidluli isikhundla sokuqala ohlwini lwezindawo ezihlonishwa kakhulu. Kodwa kancane kancane walahlekelwa ukuthandwa, futhi: ikakhulukazi ukwakhiwa kwe-cottages deluxe manje kudlula futhi kuqondiswe eNew Riga, lapho isakhiwo sakhiwa khona futhi, futhi izindleko zemihlaba azigcini umkhawulo.
Izinketho ezengeziwe zinikezwa emakethe ye-elite real estate, okudingeka ukuba iklayenti iqhubeke. Namuhla, abathengi banakekele konke, kusukela endaweni nendawo yokuphila, kuya ezintweni zokukhiqiza ekhaya kanye nengqalasizinda.
Birch Alleys LCD: indawo, incazelo
I-LCD "iSuglovsky Manor": incazelo yephrojekthi nokubuyekezwa
Apartments Khimki Ngezindleko Ezifanelekayo Zenkampani Hzn
Amarabi izinja: indlela yokubona izimpawu, izimbangela kanye nezici ukwelashwa
Drama Russian Theatre (Izhevsk): umlando, repertoire, qembu
Izifo yezitho zangaphakathi. atony emathunjini
Comedy izincwadi - uhlobo idrama multivariate